Semalt विशेषज्ञ: स्वचालित रूपमा एक्सेल वेबसाइटबाट डाटा डाउनलोड गर्दै
इन्टर्नेटमा धेरै उपयोगी जानकारी समावेश गर्दछ, तर कहिलेकाँही त्यो जानकारी कुनै न कुनै तरिकाले भण्डारण र प्रशोधन गरिनु पर्छ। यी उद्देश्यका लागि माइक्रोसफ्ट एक्सेल स्प्रेडशिटहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ। यद्यपि विभिन्न साइटहरूबाट तथ्याical्कगत डेटा म्यानुअल रूपमा मात्र स्वचालित रूपमा पनि स be्कलन गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, तपाई दर्जनौं साइटहरु बाट ताजा डेटा बचाउन को लागी आवश्यक छ। अवश्य पनि, यो डेटा म्यानुअल रूपमा बचत गर्न लामो समय लिन्छ, त्यसैले तपाईं एक्सेलमा स्वचालित डाटा आयात उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। किन "तपाइँ प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ"? यसको मतलब यो हो कि सबै साइटहरूले तपाईंलाई यो उपकरण प्रयोग गरेर डाटा आयात गर्न अनुमति दिँदैन। म तपाईंलाई पछि कारण बुझाउँदै छु। तर अझै, यसले प्राय जसो केसहरूमा सहयोग पुर्‍याउँछ।
स्वचालित डेटा आयात उपकरण "डेटा" ट्याबमा अवस्थित छ। यहाँ "वेबबाट" चयन गर्नुहोस् (एक्सेलको केहि संस्करणहरूमा तपाईले "बाह्य डेटा प्राप्त गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुपर्नेछ)।
यसले "नयाँ वेब क्वेरी" खोल्यो जहाँ तपाइँ वेबसाईट पृष्ठको ठेगाना लेख्न आवश्यक छ जहाँबाट तपाइँ डेटा डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ र केहि सेकेन्ड प्रतिक्षा गर्नुहोस् उही विन्डोमा लोड हुनका लागि।
हामी उदाहरणको रूपमा वेबसाइट सॉक्रेस्ट्याट्स.कटबाट डाटा निकाल्ने छौं। म निश्चित छु कि तपाईं मध्ये धेरैले फुटबलको मजा लिनुहुन्छ र एक टेबलमा विश्वभरिका फुटबल लीगहरूको बारेमा अप-टु-डेट डाटा संकलन गर्न चाहानुहुन्छ। त्यहाँ उपयोगी तथ्या .्कहरूको भार छन् तर स्पेन ला लिगाको स्कोर तालिकाबाट सुरु गरौं।
तपाईले धेरै पहेँलो वर्गमा तीर देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू तत्वहरूलाई देखाउँदै छन् तपाईं एक्सेल तालिकामा निकाल्न सक्नुहुनेछ। एरोमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईलाई आवश्यक तत्वमा देखाउँदै। नोट गर्नुहोस् कि तपाई एक पटकमा एक भन्दा बढी तालिका चयन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई के चाहिन्छ स्कोर टेबल हो।
त्यसपछि दायाँ तल्लो कुनामा "आयात गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
यसले "तपाइँ डेटा कहाँ राख्न चाहानुहुन्छ" सोध्नेछ। तपाईलाई चाहिएको सेल नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ वा "ठीक छ" मा क्लिक गर्नुहोस्, र यो पहिलो कक्षबाट सुरू भएर देखा पर्नेछ।
र यहाँ परिणाम छ - सबै जानकारी अब हाम्रो Excel तालिकामा छ।
यो डाटा अझै स्थिर छ जबकि हामीलाई यो अहिल्यै र कहिले अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। त्यसोभए, तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भनेको "सबै रिफ्रेस" मा क्लिक गरेर डेटा म्यानुअली रिफ्रेस गर्नुहोस्।
तर त्यो होईन हामी यहाँ को लागी, सही छ? प्रत्येक पटक यसलाई क्लिक गर्दा निकै कष्टकर हुन सक्छ यदि तपाईंलाई लगातार अपडेट जानकारीको आवश्यक पर्दछ भने, उदाहरणका लागि, मुद्रा दरहरू। अब "जडानहरू" ट्याबमा "गुणहरू" मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईं टेबुलहरू स्वत: ताजा बनाउन सक्नुहुन्छ - यसले अन्तराल वा हरेक पटक तपाईं फाइल खोल्नुहुनेछ सबै डाटा अपडेट गर्न सक्दछ।
किन यो कहिलेकाँही काम गर्दैन
स्वत: डाटा आयात उपकरणले काम नगर्न सक्छ भनेर केहि शब्दहरू। तपाईंले एक्सेलमा वेब पृष्ठ खोल्नुभयो र टेबलको रूपमा प्रस्तुत डाटा फेला पार्नुभयो, तर तीरहरू जुन तपाईंलाई तिनीहरूलाई आयातको लागि चिन्ह लगाउन अनुमति दिन्छन् तिनीहरूको छेउमा देखा पर्दैन। किन? लगभग एक दशक पहिले वेबसाइटहरूमा सबै ट्याबुलर डाटा विशेष मार्कअपको रूपमा देखा पर्‍यो - ट्याबहरू TABLE। यस्तो तालिका चिन्न रोबोटको लागि केकको टुक्रा थियो। तर समयसँगै वेब पृष्ठहरूमा डाटा प्रस्तुत गर्ने विधिहरू परिवर्तन भएका छन् - डाटा आफै र यसको प्रदर्शन अलग गरिएको थियो। त्यसोभए जब तपाइँ वेब पृष्ठमा हेर्नुहुन्छ र तालिकाहरूमा डेटा देख्नुहुन्छ, तपाइँ यो कुरा निश्चित हुन सक्नुहुन्न कि यस डेटाको कोडमा टेबल संरचना छ। केहि अवस्थाहरूमा, आयात विजार्डले केवल हालको वेब पृष्ठको स्रोत कोडको विश्लेषण गरेर टेबलको उपस्थिति पहिचान गर्न सक्षम छैन।
बधाई छ! अब तपाईं सजिलै वेबसाइटबाट डाटा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तालिकामा एक्सेल प्रयोग गरेर यसलाई स्वत: ताजा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सरल उपकरणले तपाईंको जीवनलाई सजिलो बनाउन र अनावश्यक प्रतिलिपि-टाँस्न सहयोग गर्दछ।